Nhau - Zvakawanda Zvinhu Zvinobatsira ISO Nyowani England Mamiriro ekunze Akaoma Nguva yechando
Dunhu uye zvepasirese zvinhu, pamwe nekugadzirira uye kunonoka kutonhora kwemamiriro ekunze, zvakabatsira ISO New England kupona mwaka wechando wa2014-15 nenyaya shoma dzekushanda uye nemitengo yakaderera zvakanyanya, iyo ISO yakati Chishanu.
Mumushumo kuNew England Power Pool Participants Committee, Vamsi Chadalavada, mutevedzeri wemutungamiriri we ISO New England, uye mukuru wevashandi, akacherekedza ISO yezuva-pamberi pevhareji mitengo yepakati yemahara yaive $ 64.25 / MWh munaKurume, kudzika 45.7% kubva Kukadzi uye pasi. 42.2% kubva munaKurume 2014.
Pakati pegadziriro dzakabatsira ISO New England gore rino yaive Chirongwa Chayo Chekuvimbika Chando, maererano neshumo, iyo yakapa mubayiro majenareta ekuchengeta huwandu hwakakwana hwemafuta kana kondirakiti yezvinhu zvine gasi zvakasikwa, zvinoenderana neshumo yakapihwa kune vanobatika.
Global glut yeLNG, inosanganiswa nemitengo yakakwira yegasi yemwaka munguva yechando ya2013-14, zvakakonzera kuti LNG iwanikwe munzvimbo iyi.
Uye kuderera kwakaperera kwemitengo yemafuta kwakaitika kubvira zhizha rapfuura kwakaita kuti "chiziviso chemafuta chinowanza kazhinji hupfumi kumhanya kupfuura chizvarwa chemagetsi-gasi ... [nekudaro] kuchideredza kusagadzikana kwemutengo wegesi nemagetsi," yakadaro ISO.
Ivhareji yemutengo wegasi chaiwo munzvimbo yeNew England yaive madhora 7.50 / MMBtu munaKurume uyu, zvichienzaniswa neinenge $ 16.50 / MMBtu munaKukadzi, iyo ISO yakati.
New England yaive nehunyoro hwaZvita, uye mamiriro ekunze akaipisisa akanonoka kusvika Kukadzi, "apo mazuva aive akareba uye kushandiswa kwemagetsi kwakaderera," iyo ISO yakati.
New England yaive ne3% yakawanda mazuva ekupisa kubva munaZvita kusvika Kukadzi, zvichienzaniswa nenguva imwechete ya2013-14, asi Zvita HDD yakazara yaive ne14% pasi paZvita 2013, nepo iyi yaFebruary HDD yakazara yaive 22% kupfuura Kukadzi. 2014.
Chimwe chinhu muUSA New England chisinganetsi chando kwaive kushanda kwesimba, kuveura simba rese rekushandisa uye yepamusoro kudiwa, iyo ISO yakati.
ISO New England yakadya ingangoita 10.9 Twh munaKurume, zvichienzaniswa neinenge 11 Twh zvese muna Kukadzi uye munaKurume 2014, sekureva kweshumo.